reegaay.com - Al-Shabaab oo markale toogasho ku fuliyay 5 Ruux
Al-Shabaab oo markale toogasho ku fuliyay 5 Ruux
by admin | Friday, Jul 5, 2019 | 187 views
Falkan toogasho ah ayaa Al-Shabaab waxaa ay ka fuliyeen fagaaro ku yaalla deegaanka Salagle ee gobolka Jubbada Dhexe,waxaana ay ku fuliyeen 5 Rag ah oo ay ku Eedeeyeen inay la Shaqeeynayeen Dowladda Federaalka iyo Dowladaha taageera.
Goobta Al-Shabaab ay ku toogteen 5-ta ruux ayaa waxaa ku sugnaa Boqolaal ka mid ah Shacabka deegaanka Xagar ee gobolka Jubbada Hoose, kuwaas oo Al-Shabaab ay ku amreen inay fagaarahaas tagaan si toogashada ay u daawadaan.
5-ta Ruux oo ay Al-Shabaab toogashada ku fuliyeen oo dhamaantood rag wada ah ayaa waxaa ay Magacyadooda ku kala sheegeen.
1: Maxamuud Bashiir Hilowle oo ay ku eedeeyeen in uu la Shaqeynayay Sirdoonka Mareykanka.
2: -Cabdi Xakiin Xuseen Cabdi Nuur oo ay ku eedeeyen in uu la Shaqeynayay Dowlad goboleedka Jubbaland.
3: Cabdi Raxiim Axmed Yuusuf oo lagu eedeeyay in uu la Shaqeynayay Sirdoonka Mareykanka.
4: Isxaaq Cabdullaahi Xasanoow oo ay Al-Shabaab ku eedeeyaan in uu la Shaqeynayay Maamulka Koonfur Galbeed.
Iyo Idiris Yuusuf dhallin oo lagu eedeeyay in uu la Shaqenayay Ciidamada Bangaraafta ee xoogga dalka Soomaaliyeed,kuwaas oo uu tababaray Mareykanka.
Waa maalintii labaad oo xriir ah oo ay Al-Shabaab toogasho ku fuliyaan dad ay ku eedeynayaan inay la Shaqeeyaan Dowladda Federaalka iyo Dowladaha taageera,waxaana maalin ka hor fagaaro ku yaalla deegaanka Xagar ee gobolka Jubbada Hoose ay ku toogteen 5 Rag ah oo ay ku Eedeeyeen la Sahqeynta Dowladda iyo dalalka taageera.
Ninkii ugu da’da weynaa oo loo magacaabay Guddoomiye degmo ka tirsan Gobolka Banaadir
Gudoomaiyaha Jaaliyada Koonfur Gal beed ee Portland ayaa ka hadlay xaalada siyaasadeed ee soomaaliya.
January 17, 2020, No Comments on Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka Galmudug oo la doortey
January 17, 2020, No Comments on Villa Somalia oo jawaab ka bixisay cabashada hooyo Amran Maxamed Cismaan
Golaha Aqalka sare oo ansixiyey Xeerka Saxaafada
January 14, 2020, No Comments on Golaha Aqalka sare oo ansixiyey Xeerka Saxaafada
January 13, 2020, No Comments on Weerar ka dhacay Gaarisa oo macalimiin lagu dilay
Askari ka tirsan ciidamada dowladda oo Ilmo yar ku dilay xarunta G/Banaadir
January 13, 2020, No Comments on Askari ka tirsan ciidamada dowladda oo Ilmo yar ku dilay xarunta G/Banaadir
January 13, 2020, No Comments on Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabeelle oo gaarey Baydhabo
Al-Shabaab oo burburiyay anteenooyin Isgaarsiineed
January 11, 2020, No Comments on Al-Shabaab oo burburiyay anteenooyin Isgaarsiineed
25 qof oo lagu dilay xarun ciidan oo ku taala Niger
January 10, 2020, No Comments on 25 qof oo lagu dilay xarun ciidan oo ku taala Niger
Muxuu Ilkacase ka ogaa isku dayga khaarijin ee Asad Xaajiyow?
January 10, 2020, No Comments on Muxuu Ilkacase ka ogaa isku dayga khaarijin ee Asad Xaajiyow?
Dowlada hoose ee magaalada baladweyne oo bilowday in dadkii nafada lacag ka qaado.
January 9, 2020, No Comments on Dowlada hoose ee magaalada baladweyne oo bilowday in dadkii nafada lacag ka qaado.
Maxbuus hore uga tirsanaa Daacish oo ku geeriyooday xabsiga Dhexe
January 9, 2020, No Comments on Maxbuus hore uga tirsanaa Daacish oo ku geeriyooday xabsiga Dhexe
Nasra Cali Geesood oo lagu toogtay magaalada Muqdisho
January 9, 2020, No Comments on Nasra Cali Geesood oo lagu toogtay magaalada Muqdisho